यायावर शुशिल Sunday, May 22, 2022
रात भर कर रहे थे तेरि तारिफ चांद से चांद इत्ना जला कि सुबह तक व सुरज होगया। यो सेयर त गरे तर पढेर मुसुक्क मुस्कान आएको हेर्न पाइन नि मैले। समय रातको तिन। रातको भनौ या बिहानी को। यो भिन्नता नि उनी र तिमी जस्तै हो। कहिलै छुट्टाउन नसकिने। रातभर निद्रा नलाग्ला नि भेट्ने भनेर साथीहरु जिस्काउदै थिए। मैले भनिदिए म चेन्ज भए। यो मोहम्बत लड्की इन सब मे मन हि नही लग्ता। भन्नला…
सुनन मैले उस्लाइ बोलाएर सोधे। उस्ले हजुर भन्नुस भन्दै मलाइ भनी। तिमीलाइ माया के जस्तो लाग्छ ? अचानक यस्तो किसिमको प्रश्न देखेर उस्ले भनी के भएको छ आज हजुरलाइ। ठिक त हुनुहुन्छ नि? म जनरल्लि सोधेको नि। सोध्न हुन्न र भनिदिए। जवाफमा उस्ले भनी थोरै चाहाना अनि बढी समय बर्बादि । मैले उस्को थोरै चाहाना वाला शब्दलाइ समातेर भने। त्यहि थोरै चाहाना भएर मलाइ कम समय दिने हौ तिमी…
ब्याट्री लो | यायावर शुशिल
यायावर शुशिल Wednesday, April 20, 2022
म धेरै दिनपछि फेसबुकको दर्शन गर्न गए। चुनाबी माहोल के कस्तो चल्दै छ भनेर हेर्न गएको म एक्कासी उन्को फोटोमा हराए। हेर्दा हेर्दै मोबाइलमा ब्याट्री लो भन्यो। मेरो आधा ब्याट्री त उन्कै फोटो हेर्दा सिद्धिएछ। आखिर नसकिओस् नि कसरी । मैले कुनै दिन भनेको थिए। तिम्लाइ रातो एकदम सुहाउछ।के तिमी मेरो लागि रातो सारी लाएर तयार हुन्छौ। आज उनी त्यहि रातो सारीमा मेरै लागि तयार भए जसरी…
यायावर शुशिल Tuesday, January 25, 2022
यो महिना आफैमा फरक लाग्छ। अझै एक कथा जोड्नु पर्दा कुनै एक समयमा एक पण्डित थिए। भिक्षा-दान बाट पाएको कुराबाट आफ्नो जिवन चलाउथे। जसो तसो जाडो खेप्दै माघ सम्म आए पण्डित तर यस महिनामा आएर आफ्नो दानमा पाएको गाइ पनि बेच्न पर्यो जाडोबाट बच्नको लागि कम्मल किन्न भनेर। कति डर छ माघ प्रति भन्ने यहि बाट नै पुष्टि हुन्छ । त्यसैल त यो महिना फरक छ नि तर पनि माघ महात्माको महिना हो। …